Amplero: Nzira Yakapusa Yekuderedza Mutengi Churn | Martech Zone
Chitatu, September 23, 2015 Chipiri, Gunyana 22, 2015 Lara Albert
Kana zvasvika pakudzikisa mutengi churn, ruzivo isimba kunyanya kana iri muchimiro cheupfumi hwehunhu hunhu. Sevashambadzi tinoita zvese zvatinogona kuti tinzwisise maitiro evatengi uye nei vachisiya, kuti tikwanise kuzvidzivirira.
Asi izvo izvo vatengesi vanowanzo kuwana ndeye churn tsananguro pane kungofungidzira kwechokwadi kwechurn njodzi. Saka unosvika sei pamberi pedambudziko? Iwe unofanotaura sei kuti ndiyani angasiya nekukwana kwakaringana uye nguva yakakwana yekupindira munzira dzinokanganisa maitiro avo?
Kwenguva yakareba sevashambadziri vanga vachiedza kugadzirisa dambudziko rehurombo, nzira yechinyakare yekumakisheni modhi kwave kuri "kurova" vatengi. Dambudziko rekukora zvibodzwa nderekuti mazhinji ekuchengetedza mamodheru anotara vatengi vane zvibodzwa zvinoenderana nemaoko ekugadzira hunhu hwakawanda mudura rekuchengetedza uye kuyedza maitiro avo mukuvandudza kusimudzwa kweiyo static churn modhi. Maitiro acho anogona kutora mwedzi yakati wandei, kubva pakuongorora maitiro evatengi kuburikidza nekutumira nzira dzekushambadzira dzekuchengetedza. Zvakare, sezvo vashambadziri vachiwanzo gadziridza zvikwereti zvevatengi pamwedzi, zvikwangwani zvinokurumidza zvinoratidza kuti mutengi anogona kusiya zvakarasika. Nekuda kweizvozvo, yekuchengetedza nzira dzekutengesa dzakanonoka.
Amplero, iyo ichangobva kuzivisa kubatanidzwa kwenzira nyowani yekuzvibata modelling kuti ipe muchina wayo kudzidza kudzidza kuita kwako, inopa vashambadziri nzira yakangwara yekufungidzira uye kudzivirira churn.
Kudzidza kwemuchina rudzi rwehungwaru hwekunyepedzera (AI) iyo inopa masystem nekwanisi yekudzidza isina kunyatsorongedzwa. Izvi zvinowanzoitwa kuburikidza nekuenderera mberi uchipa data kune uye kuva nesoftware chinja algorithms zvinoenderana nezvabuda.
Kusiyana neyakajairwa churn modhi matekiniki, Amplero anoteedzera akateedzana evatengi maitiro pane ane simba hwaro, otomatiki achiona izvo zvevatengi zviito zvine zvazvinoreva. Izvi zvinoreva kuti mushambadzi haasisiri kuvimba nechimwe chete, pamwedzi chiratidzo chinoratidza kana mutengi ari panjodzi yekubva kukambani. Panzvimbo iyoyo, hunhu hunesimba hweumwe neumwe mutengi hunovhenekwa pahwaro, zvichitungamira mukushambadzira kwakanyanya panguva.
Akakosha mabhenefiti eAmplero maitiro ekufananidza modhi:
Kuwedzera kwakarurama. Amplero's churn modelling yakavakirwa pakuongorora maitiro evatengi nekufamba kwenguva kuitira kuti igone kuona shanduko dzisingaoneki mumaitiro evatengi, uye inzwisise kukanganisa kwezviitiko zvisingawanzoitika. Iyo Amplero modhi yakasarudzika zvakare mukuti inovandudzwa ichienderera mberi sezvo paine hutsva hutsika dhata. Nekuti churn zvibodzwa hazvimbomira, hapana kudonha mukuita nekufamba kwenguva.
Kufanotaura vs. reactive. NaAmplero, churn modelling iri kumberi kutarisa zvichikonzera kugona kufembera churn vhiki dzinoverengeka pamberi. Iko kugona kuita fungidziro pamusoro penguva yakareba yenguva inobvumidza vashambadziri kubata vatengi avo vachiri kuita basa asi vanogona kukonzeresa mune ramangwana nemishumo yekuchengetedza uye zvinopihwa vasati vasvika padanho rekusadzoka uye kusiya.
Automated kuwanikwa kwezviratidzo. Amplero otomatiki anowana granular, asiri-akajeka masekonzi anoenderana nekuongorora kwevatengi yakazara maitiro maererano nenguva. Kuenderera mberi kwekutsvaga kwedata kunotendera kuti kuonekwe kwemaitiro akasarudzika pakutenga, kunwa, uye zvimwe zviratidzo zvekubatana. Kana paine shanduko kumusika unokwikwidza uyo unoguma neshanduko mukuita kwevatengi, iyo Amplero modhi inozoenderana nekuchinja uku, ichitsvaga maitiro matsva.
Kutanga Kuzivikanwa, apo kushambadzira kuchiri kushanda. Nekuti iyo Amplero yakateedzana churn modhi inoregedza yakawanda granular data yekuisa, nguva shoma shoma inodikanwa kuti ubudirire kurova mutengi, zvichireva kuti Amplero's modhi inogona kuona machurner ane hupfupi hugaro. Mhedzisiro yeiyo propensity modelling inogara ichidyiswa mumuchina weAmplero wekushambadzira chikuva uyo unobva wawana nekuita akakosha ekuchengetedza zviito zvekushambadzira kune wega mutengi uye mamiriro.
NaAmplero vashambadziri vanogona kuzadzisa 300% zvirinani churn kufanotaura kutendeseka uye kusvika ku400% zvirinani kuchengetedza kwekushambadzira pane kana uchishandisa echinyakare modelling nzira. Kuva nekwanisi yekuita yakajeka uye nenguva yekufungidzira kwevatengi kunoita mutsauko wese mukukwanisa kukudziridza kugona kwakasimba kwekudzora churn nekusimudzira kukosha kwehupenyu hwevatengi.
Kuti uwane rumwe ruzivo kana kukumbira demo, ndapota shanya Amplero.
Tags: maisaraGlobysmachine learningPersonalizationtarisayakanangana nemitemo
Lara ndiye Mutevedzeri weMutungamiri weGlobal Marketing pa Globys kwaanotora mabasa ekushambadzira emakambani uye anotungamira kushambadzira kwekutenga kwekambani mamiriro ekushambadzira zvigadzirwa. Pakutanga aibata maneja emhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvekushambadzira kuKraft Foods, America Online uye VeriSign.
Google Analytics Maitiro Ekuzivisa: Zvimwe Zvinobatsira Kupfuura Zvaunoziva!